एमाले महाधिवेशनको मुख्खैमा यी नेताले गरे विद्रोह, भने बैठक ‘अवैध’ - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमाले महाधिवेशनको मुख्खैमा यी नेताले गरे विद्रोह, भने बैठक ‘अवैध’
नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको विषयमा बढेको विवाद अझ लम्बिने संकेत देखिएको छ । १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित असन्तुष्ट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावलले उक्त सहमति विपरितका सबै बैठक अवैध भएको जनाएका छन् ।
उनले आजको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठक बष्हिकार गर्दै त्यसलाई अवैध र अमान्य भएको बताएका छन्। मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै रावलले भनेका छन्, ‘आज हुने भनिएको कथित सु.प. (सुदूरपश्चिम) प्रदेश कमिटीको बैठक १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि १२ को विपरीत छ । ‘यो गुटबन्दीको नमुना हो । यो बैठक र यसका निर्णयहरू अवैध र अमान्य छन् । अपानि–१२ झापामा लागू हुने, सु.प.मा लागु नहुने किन ? यहाँको भूमि बाह्य अतिक्रमणमा परेकोले हो कि ?’
१० सहमितमा साविकका एमालेका कमिटी तथा जिम्मेवारीहरु यथावत हुने भनिएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज खोसिएकोमा रावलले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर आएका माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज तोकेपछि रावल असन्तुष्ट छन् ।
यस्तै यस्तै नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आगामी मंसिरको दोस्रो साता सम्पन्न हुँदैछ । महाधिवेशनले छान्ने नेतृत्वका लागि एमालेले आगामी विहीबार करिव २ हजार (१९९९) महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्दैछ । २७ गते देशभरका करिव साढे सात लाख कार्यकर्ताबाट छानिने १९९९ महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछन् । महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै एमालेले कस्ता र कुन कुन नेतालाई नेतृत्वमा पुर्याउला भन्ने चासो र बहस नेता कार्यकर्तामा सुरु हुन थालेको छ । खासगरी अध्यक्षसहित निर्वाचित हुने १५ पदाधिकारीमा कस्ता कस्ता अनुहार आउलान् भन्ने चासो एमाले वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
हुन त कक्षा दोहोर्याएर नपढ्ने घोषणा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै आगामी महाधिवेशनमार्फत् पार्टीको प्रमुख पद अध्यक्षमा दोहोरिने लगभग पक्का छ । किनभने यसअघि ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले विधान परिवर्तन गर्दै ओली अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषण गरिसकेको छ, जसले ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्न र अर्को कार्यकाल विताउन कुनै अवरोध देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेता माधव नेपालले पार्टी छोडेसँगै तत्काल एमाले पार्टीमा ओलीलाई ‘काउन्टर’ दिने नेताको खडेरी परेको देखिन्छ ।
यसअघि ओलीलाई काउन्टर दिने नेताका रूपमा चिनिएका माधवकुमार नेपाल एमाले छाडेर अर्को पार्टी गठन गरेकाले पनि पार्टीमा ओलीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा अरु नेता फ्रन्टलाइनमा आउन सक्ने हैसियतमा छैनन् । माधव नेपाल एमालेबाट बाहिरिएसँगै पार्टीमा ओलीको प्रभाव पकड थप बढ्न पुगेको ओली पक्षको विश्लेषण छ ।
ओलीको आलोचना गर्ने भनेर चिनिएका उपाध्यक्षहरू रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सांगठनिक धरातलमा कमजोर रहेकाले उनीहरुका सामु ओलीको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताइन्छ । महाधिवेशनमार्फत् २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छनोट गर्ने जनाएको एमालेले औपचारिकताका लागि महाधिवेशन गर्ने भएपनि १५ पदाधिकारीको टीम भने सहमतिमै छान्नुपर्छ भन्ने मत एमालेमा बलियो छ ।